Weerar Gaari Dagaal looga Gubay Melleteriga Itoobiya Oo Ka Dhacay Deegaanka Ceelgaal Ee Gobolka Hiiraan.
Tuesday February 06, 2018 - 16:25:58 in Wararka by Super Admin
Xoogaga Al Shabaab ayaa markale weerar jidgal ah u dhigay ciidamo katirsan gumeysiga Itoobiya xilli ay ku sugnaayeen bartamaha dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya deegaanka Ceelgaal ee dhaca duleedka magaalada Beled Weyne ayaa sheegaya in weerar dhabbagal ah uu qabsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Xabashida Itoobiya oo wadada ku socdaalayay.
Dagaalka ayaa bilaawday kadib markii XoogagaAl Shabaab oo aad u hubeysan ay wadada ugaleen ciidamo Itoobiyaan ah oo ka yimid dhanka deegaanka Matabaan ee dhaca halka ay iska galaan gobollada Galguduud iyo Hiiraan waxayna kusii Jeedeen Saldhigga Melleteri ee ay kuleeyihiin duleedka Beled Weyne.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiicda iyo rasaas xooggan oo lays dhaafsanayay, warar hodhac ah waxay sheegayaan in gaari uu saaranyahay qoriga Zuugga laga gubay ciidamada Itoobiya ee weerarka jidgalka ah loo dhigay.
Ciidamada Amxaarada Itoobiya ee weerarka xooggan la kulmay ayaa la sheegay in ay ku hakadeen halkii dagaalku ku qabsaday oo ku dhow Tuulada Ceelgaal oo qiyaastii 20KM ujirta magaalada Beled Weyne.